Duqa Muqdisho oo soo celiyay Guri mudo 28-sano ah xoog lagu heestay (Daawo Sawirada) - RajoQaran News Around The World
Home WARARKA Duqa Muqdisho oo soo celiyay Guri mudo 28-sano ah xoog lagu heestay...
Duqa Muqdisho oo soo celiyay Guri mudo 28-sano ah xoog lagu heestay (Daawo Sawirada)
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Mudane Cabdirixmaan Cumar Cusmaan (Eng.Yarisow) ayaa hooyo Soomaaliyeed usoo celiyay guri mudo 28-sano ah xoog looga heestay.
Dadkii guriga heestay ayaa la sheegay in ay diideen in ay ka baxaan guriga kuna wareejiyaan dadkii lahaa, waxaana soo faragaliyay maamulka gobolka Banaadir oo awood u adeegsaday in guriga laga saaro dadkii heestay.
Duqa Muqdisho ayaa ka digay cawaaqib xumada Aakhiro iyo mida adduun ee sugaysa dadka sida sharci darrada ah u deggan hantida muwaadiniinta kale ee doonaya in dib loogu soo celiyo xaqooda.
Hooyada Soomaaliyeed ee maanta loo soo celiyay guriga sanadaha badan xooga looga heestay ayaa u mahad celisay maamulka Gobolka Banaadir ee ku guuleestay in gurigeeda uga saaraan dadkii xooga uga heestay.
Previous articleWafdi ka socda dowladda Qatar oo gaaray magaalada Dhuusamareeb.
Next articleC/raxmaan C/shakuur oo Saddex qodob ku soo koobay sababta ay u sii jiraan Al-Shabaab